« Pack mpiasam-panjakana » : tolotra aroson’ny BNI Madagascar | NewsMada
« Pack mpiasam-panjakana » : tolotra aroson’ny BNI Madagascar
Tolotra vaovao ho an’ny mpiasam-panjakana naroson’ny banky BNI Madagascar, omaly, ny « Pack mpiasam-panjakana ». Taorian’ny « Herinandron’ny mpiasam-panjakana», nitohy ihany ny fifandraisana amin’izy ireo nandritra ny efa-bolana farany tamin’ny taon-dasa ary izao hamafisin’ny banky BNI izao. Latsaka 80 % ny saran’ny rehetra amin’ny fitambaran’ny « Pack mpiasam-panjakana » ary izay mpanjifa 1.000 voalohany tonga, mahazo 50.000 Ar fanampiny ao amin’ny tahiriny.
Ahitana endriky ny fifaninanana eo amin’ny samy banky izao ataon’ny BNI izao. Politika hoentina hisarihana mpanjifa be indrindra. Raha ny mpiasam-panjakana, maherin’ny 10 % amin’izy ireo efa manana kaonty ao amin’ny BNI. Ny fanjakana rahateo, manana ny politikany manao izay hanokafan’ny mpiasam-panjakana kaonty any amin’ny banky. Ao ireo minisitera efa nahavita fifanarahana manokana amin’ny banky.
Tolotra karazany maro ka samy mijery izay tandrifiny ny rehetra. Misy, ohatra, ny fampifandraisana haingana ny karama mirotsaka any amin’ny banky mankany any amin’ny MVola. Fiarovana ny vola izany no tsy mandany fotoana ny tompony. Manodidina ny 95 % ny Malagasy mbola mikirakira vola mivantana amin’izay fandaniana rehetra ataony. Anisan’ny fiarovan-tena amin’ny ataon’ny mpanendaka sy ny dahalo ny fialana amin’izany tsikelikely.